42 qof oo ku dhintay fatahaadii Niilka ee Suudaan xili Is-gaarsiinta iyo Korontada ay go?an yihiin – Radio Daljir
Agoosto 14, 2013 4:26 b 0
Khartuum, August 14, 2013 – Tirada dhimashada ee fatahadii webiga Niil ee Suudan ayaa sii kordhaysa, waxaana wararka haatan ka soo baxaya laamaha caafimaadka ay sheegayaan in ay geeryoodeen 42 qof, sidoo kale waxaa barabaxay oo hoy la?aan ah 150, 000 ( Boqol iyo Konton kun) oo dadka deegaanka ah.
Fatahaada dadka wax ku noqday marka laga yimaado, waxaa ilaa haatan go?an jidadkii isku xiri jiray gobollada iyo magaalada caasimada ee Khartuum, waxaa sidoo kale aan shaqeynayn ilaa hadda adeegyadii is-gaarsiinta iyo kuwii korontada.
Wararka ka soo baxaya Suudaan waxay sheegayaan in fatahaada ka dhacday dalka Suudaan ay tahay tii ugu darnayd ee sanadahan, waxayna timi kadib markii ay inta badan dalka suudaan ka da?een roobab mahiigaan ah oo lixaad leh.
Dowladdaha? Qatar iyo Ethiopia, ayaa soo diray diyaarado sidey mucaawimo u badan raashin iyo dhar, dalal? kale oo Maraykanku uu ku jiro waxay ballan qaadeen, in ay kaalmo deg deg ah lasoo gaari doonaan dadka ay daadadku waxyeeleeyeen.
Hay?ada howlaha caafimaadka u qaabilsan Qarmaada Midoobey ee WHO, ayaa degniin horudhac ah oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay jirto cabsi weyn oo ay ka qabaan in meelaha qaarkood ay ka dilaacaan xanuuno ka dhasha biyaha fatahaada.
War-saxaafadeed:- Gudoomiyaasha Baarlamanka dalalka Soomaaliya iyo Uganda oo heshiis gaaray